China Oyi kpọnwụrụ sie anụ ezi Mpekere ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Huikang
Nkwalite ngwaahịa Akụrụngwa sitere na ebe a na-egbu anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Akụrụngwa akụrụngwa sitere na France, Spain, Netherlands
nkọwapụta Iberi na dais, tinye eriri
Encapsulated kefriza Method
Usoro ihe-icho-ekpuchi ihe nkiri, usoro CPF nwere ọtụtụ elele: ihe nkiri emere mgbe nri na-ajụ oyi nwere ike igbochi mgbasa na nrụrụ nke nri; belata ọnụego jụrụ oyi, kristal a kpụrụ akpụ dị mma, ọ gaghị ewepụta kristal akpụrụ akpụ buru ibu; gbochie mmebi nke cell, enwere ike igbaze ngwaahịa ahụ n'ụzọ nkịtị; Texturedị nri na-atọ ụtọ n’ejighị nká.
Ultrasonic kefriza technology
Usoro ihe nkiri na-ekpuchi ihe nkiri, UFT na-eji ebili mmiri ultrasonic iji meziwanye usoro usoro nri. Ihe bara uru bu na ultrasound nwere ike ime ka ikpo oku di oku n'oge oyi, kwalite nkpuchi ice n'oge oyi nri, ma melite ogo nke nri oyi. Mmetụta dị iche iche kpatara site na ultrasound nwere ike ime ka ókèala ahụ dị ala, mee ka ebe kọntaktị ahụ dịkwuo ike, ma mee ka nkwụsị ọkụ na-ekpo ọkụ ghara ịda mbà, nke bara uru iji mee ka ọnụọgụ ọkụ ahụ dịkwuo elu. Nnyocha banyere iwusi ike nke usoro mgbanwe ọkụ na-egosi na ultrasound nwere ike ịkwalite ntọala na mgbochi nke ice crystallization Crystal growth.
Akwa-nsogbu kefriza technology
Nnukwu Nsogbu Igwe. HPF na-eji mgbanwe ngbanwe iji chịkwaa mgbanwe mgbanwe oge nke mmiri na nri. N'okpuru ọnọdụ nrụgide dị elu (200 ~ 400MPa), a na-eme ka nri dị jụụ na ọnọdụ okpomọkụ ụfọdụ. N'oge a, mmiri ahụ anaghị akpụkọ, wee mee ngwa ngwa A na-ewepụ nrụgide ahụ, ma kpụrụ kristal ice na nke edo edo n'ime nri ahụ, na olu nke kristal ice agaghị agbasa, nke nwere ike belata mmebi nke nri. anụ ahụ ma nweta nri oyi kpọnwụrụ nke nwere ike ịkwado ogo nri mbụ.
Nke gara aga: Friji sie anụ ezi
Osote: Ire Nri Anụ Nju oyi